July Dream: February 2009
ခုနှစ်ကြိမ်တော့ ရှိသွားပါပြီ။ နတ်လမ်းညွှန်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့မယ်။ အဲဒီကို အဲဒီကနေ သွားပါတဲ့ခင်ဗျာ။
တက်ရောက်တဲ့သူတွေကို မှတ်တမ်းယူပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းအစုံ ကျောင်းပေါင်းစုံက လာကြပါတယ်။
စလုံးကြက်ခြေနီ သွေးလှူရှင်စုဆောင်းရေးအဖွဲ့ ညွှန်မှုးက အဖွင့်အမှာစကား ဦးစွာပြောကြားပါတယ်။
၂၀၀၉ မှာ လုပ်မယ့် သွေးစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းတွေကိုလည်း
ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင် တွဲဘက်ညွှန်မှုး ဒေါက်တာတစ်ဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
တက်ရောက်တဲ့ ဧည့်ပရိသတ်လည်း မနည်းမနှောပါပဲ။ ဒါတောင် အရင်နှစ်လောက် မများဘူးဆိုပဲ။
လက်ဖက်ရည်ချိန်မှာ ၀ါးတီးဆွဲနေကြတာပါ။ ပွဲအပြီးမှာ နေ့လည်စာလည်း ကျွေးပါသေးတယ်။
လုပ်ခဲ့ပြီးသမျှ Bloodmobile ပွဲတွေက ပိုစတာတွေ နဖူးစည်းစာတန်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားတာပါ။
Institute of Mental Health က ဌာနမှူးတစ်ယောက်ကလည်း အားပေးစကားတွေ ပြောသွားသေးတယ်။
Volunteer ကြက်ခြေနီဆိုတာ သိသာစေပါတယ်နော်။ ဒီမှာက Volunteerတွေ မျက်နှာမငယ်ရဘူး။
အဖွဲ့အလိုက် ကျောင်းအလိုက် သွေးလှူဒါန်းမှုအပေါ်မှာရှိတဲ့ ခံစားချက်ပီတိတွေ မျှဝေကြပါတယ်။
အဲဒီ မျှဝေချက် ပီတိတွေကို Play back အက အဖွဲ့က ထိထိမိမိ သရုပ်ဖော် ကပြပါတယ်။
Play back အကအဖွဲ့ကို ကြက်ခြေနီဝက်ဝံရုပ်တွေကို အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးခဲ့ပါတယ်။
Posted by JulyDream at 9:19 PM9comments:
မနက်ဖြန် အဲဒီပွဲလေးကို ကင်မရာယူပြီး သွားလိုက်အုံးမယ်။ သူတို့တွေ ဘာတွေကို ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ကြတယ် ဆိုတာကို သွားလေ့လာချင်လို့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ အဆင်ပြေပြေ ပြန်သုံးလို့ရတာရှိရင် သုံးကြည့်တာပေါ့။ လာရောက်လေ့လာချင်သူများရှိရင် လာနိုင်ကြောင်း အသိပေး ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ၀ါးတီးလည်း ရှိပါတယ်။
Posted by JulyDream at 7:51 PM6comments:
Posted by JulyDream at 8:08 PM 26 comments:
Posted by JulyDream at 10:59 PM 21 comments:
Posted by JulyDream at 2:47 PM 10 comments:
Posted by JulyDream at 11:23 PM 22 comments:
ညှာတာမှု ကင်းမဲ့လှစွာ လေပွေသရမ်းတွေ
အလစ်ကိုချောင်း တစ်ဘက်သား တစ်ချက်အငိုက်ကို
အနီရောင် စွန်းထင်းကာ အလှမပြည့်ခင် မြေမှာခ ရရှာပြီ။
ကြည်လင်ကာ ပြန့်ပျူးတဲ့ ရေအပြင်ဟာ
ဲ မောင့်အရိုင်းပန်း မောင့်အသည်းပန်း
သေတမန် ပြောင်းဝကို အရိုင်းပန်းနှယ်
တေးရေးကတော့ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ပဲ ထင်ပါတယ်။ တေးဆိုကတော့ ကိုထီးလို့ခေါ်တဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ပါပဲ။ အဲဒီခေတ်အခါက ဒီသီချင်း ဆင်ဆာလွတ်ခဲ့တာ အံ့သြမိပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာတော့ ဒီလိုသီချင်းတွေ ဆင်ဆာ လွတ်မယ် မထင်ပါဘူး။ သီချင်းမှာပါတဲ့ စာသားတွေက သိသာလွန်းလှပါတယ်။ အခုတလော သတင်းမွှေးနေတဲ့ သီချင်းအချို့ကို ရေးစပ်နေတဲ့သူတွေ ဒီသီချင်းကို အတုယူသင့်တယ်လို့ ရိုးရိုးသားသား မြင်မိပါတယ်။ အကျည်းတန် ညစ်ညမ်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးတစ်ခုကို စကားလုံး လှလှလေးတွေနဲ့ နားခံသာအောင် ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ အနုပညာရဲ့ အရည်အသွေးကို ကျွန်တော် တန်ဖိုးထား လေးစားမိတာ အမှန်ပါပဲ။
အဲဒီသီချင်းကို ခံစားကြည့်မိတော့ သီချင်းက အခုခေတ် မဟုတ်တဲ့ ဟိုးအရင်ခေတ်က ရှမ်းပြည်ကိုများ နောက်ခံထားလေမလားပဲ။ အခုခေတ်မှာရော အကျုံးဝင်နေသေးလား။ ရေတိမ်နစ်ရသူက ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သေတမန် ပြောင်းဝဆိုတာကြီးက ကြောက်စရာကြီး။ တွတ်ပီကိုင်တဲ့ သေနတ်လို နှစ်လုံးပြူးသေနတ်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။ စာနာမှုလုံးဝမရှိတဲ့ လူယဉ်ကျေးတွေဆိုတာလည်း ဘယ်သူတွေကို ပြောချင်တာလဲ မသိဘူးဗျာ။ တောထဲမှာ နေတဲ့သူတွေကိုတော့ အရိုင်းအစိုင်းလို့သုံးထားတာ မြင်ဖူးဖတ်ဖူးမိတာပဲ။ အဲဒါကလည်း ပကတိ ရိုးသားဖြူစင်မှုကို အရိုင်းဆန်တယ်လို့ ပြောထားပုံပါပဲ။ ဒီအဖြေကို သိနေလည်း မဖြေတာပဲ ကောင်းပါတယ်လေ။
Posted by JulyDream at 9:00 AM 11 comments:
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး စစ်ပွဲကို ခေါင်းဆောင်နေသော သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဗမာပြည်ဘွား တိုင်းရင်းသား အားလုံးအပေါ် ညီရင်းအစ်ကို ဆွေမျိုးဉာတိ အစစ်ကဲ့သို့ ယူဆထားလျက် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးကို မည်သည့်ဘက်မှ မငဲ့ညှာဘဲ အဂတိတရား ကင်းရှင်းစွာ ထာဝစဉ် စောင့်ရှောက် ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည် ဟူသော အသိဥာဏ်သည် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတိုင်း၏ ဦးနှောက်တွင် စွဲမြဲလျက် ရှိလေပြီ ဖြစ်ရကား "ဗိုလ်ချုပ်တယောက် ရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ငါတို့တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိ" ဟူသော တွေးတောချက်ကလည်း သူတို့တတွေအား နှစ်သိမ့်စေကာ ဗမာများနှင့် ရဲရဲကြီး လက်တွဲကာ လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ထို့ကြောင့်ပင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီး၍ ဖဆပလ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ပင် သဘာပတိပြုလျက် အထင်အရှား တည်ထောက်လိုက်သောအခါ ကရင် ဗမာ မွန် ရခိုင် မူဆလင် စသော လူမျိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများ လူငယ်အစည်းအရုံး အလုပ်သမား လယ်သမား သမဂ္ဂအစည်းအရုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ မီးသတ်အဖွဲ့စသော လူထုအသင်းအပင်းများတို့သည် တခဲနက် ၀င်ရောက်စုရုံး၍ ဖဆပလ အလံတော်အောက်သို့ ခိုလှုံရန် လာခဲ့ကြပေသည်။
အောက်မြို့ကျေးရွာမှ တိုင်းရင်းသား လူထုအကျိုးကို မားမားမတ်မတ် သည်ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမည်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတယောက်၏ ကျော်စောသော နာမည်ဂုဏ်သတင်းသည် ဗမာပြည် အရှေ့မြောက်ဖျားရှိ မြင့်မားညှိုမောင်း၍နေသော ကချင် တောင်ကြီးများဆီသို့လည်း ပဲ့တင်ရိုက်၍ လာပြန်လေရကား ၄င်းတောင်ကြီးများ တ၀ှမ်းရှိ ကချင်(ဂျင်းဖော) အမျိုးသားတို့သည်လည်း ဗမာခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အား တွေ့ချင်မြင်ချင် အားကိုးချင်သည့် စိတ်တွေ တဖွါးဖွါး ဖြစ်ပေါ်လာလျက် ၁၉၄၆-ခုနှစ် နှစ်ဦးတွင် မြစ်ကြီးနား၌ ပြုလုပ်သော ကချင်(မနောပွဲ)ကြီးသို့ ဗိုလ်ချုပ်အား ဘိတ်မန္တက ပြုခဲ့လေသည်။ သို့သော် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသော ဖဆပလ ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံကြီးနှင့် တိုက်ဆိုင်နေ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှာ မသွားနိုင်ခဲ့ရှာပေ။
တဖန် ၁၉၄၆-ခုနှစ် မတ်လတွင် ကမ္ဘာဇတိုင်း လယ်ချာနယ်၌ ကျင်းပသော ပင်လုံကွန်ဖရင့်၌လည်း တိုင်းရင်းသား အပေါင်းတို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အား အထူးတောင့်တခဲ့ကြသေး၏။ ဤတွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်မှာ ရခိုင်ပြည်၌ ခရီးလွန်နေ၍ အချိန်မှီ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေ။ သို့ရာတွင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့ နေထိုင်ရာ နယ်ပယ်များ၌ ဗိုလ်ချုပ်သည် မည်မျှစိတ်ပါ ၀င်စားသည်ကိုကား သူအစိုးရအဖွဲ့ထဲ ၀င်ပြီးတဲ့အချိန်မှသည် နောက်ဆုံး သူရေတိမ်နစ်ခဲ့သည်အထိ ဗမာပြည် တောင်တန်းဒေသ နယ်စွန်နယ်များ ဟူသမျှကို အလွန်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းခံကာ ဒလကြမ်း ခရီးထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထင်ရှားစေခဲ့လေသည်။
ယခုဗိုလ်ချုပ်ခမျာမှာ သူကိုယ်တိုင် စတင်အုဌ်မြစ်ချကာ တည်ဆောက်ခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီးသို့ ရောက်လှုနီးမှ ကျဆုံးသွားရရှာလေရာတွင် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လူထုဆင်းရဲသားများ၊ ရဲဘော်များက ၀မ်းနည်းကြေကွဲသလောက် ကရင်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ဂျင်းဖေါစသော တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့ပင်လည်း သူတို့အဘို့ အကြီးဆုံးသော ဆုံးရှုံးခြင်း တရပ်သည် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေပြီဟု နှမြော တသ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ခဲ့ကြရ ရှာလေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးပြီးသည့် နောက်တနေ့ (၂၀-၇-၄၇)နေ့တွင် ဒူးဝါးကြီး ဆမားဆင်ဝါနောင်သည် တာဝါလိမ်း အိမ်ရှိ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ကလပ်ကို မြင်ရသောအခါ ဣနြေ္ဒ မဆည်နိုင်တော့ဘဲ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးများ ကျရှာလေတော့သည်။ ဤသို့လျှင် စစ်မက်တိုက်ခိုက်မှုကို ၀ါသနာပါ၍ ခက်ထန်သော စိတ်ကြမ်းရှိသည်ဟု ဆိုကြသော ဒူးဝါးကြီးပင်လျှင် မျက်ရည်ကျလောက်အောင် ယူကြုံးမရ ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
ဗမာပြည်မမှ လူထုနှင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတို့၏ သွေးစည်းမှု ပန်းချီကားကြီးကို တပင်တပန်း အကြိမ်ကြိမ် မွန်းမံရေးဆွဲခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်သည် ၁၉၄၇-ခုနှစ် ပင်လုံကွန်ဖရင့်တွင် ၄င်းပန်းချီကားကြီး၏ အဆုံးသတ် ချယ်လှယ်ခြင်းများ ပြီးမြောက်ခဲ့လေသည်။
၁၉၄၇-ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်။
မှတ်ချက်။ ဦးပုကလေး ရေးသားခဲ့တဲ့ ငါတို့ဗိုလ်ချုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ စာအုပ် ဒုတိယအတွဲမှ နိဒါန်းကို ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by JulyDream at 9:06 PM3comments:
ပစ္စုပ္ပန်ခေတ် ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်းကို စာတင်၍ ရေးသားသည်ရှိသော်၊ "ဗမာပြည်ဘွား တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအချင်းချင်း သွေးစည်းပြီး ညီညွတ်မှု ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ဘယ်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်သည် အချိန်အနည်းဆုံးတွင် အများဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့လေသနည်း" ဟူသော မေးခွန်းတရပ်သည်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုမေးခွန်းကို အထူးစဉ်းစား၍ မနေဘဲ မဆိုင်းမတွ ကျွန်ုပ်ဖြေကြားလိုပေသည်။
ကျွန်ုပ်၏အဖြေကား "ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဂျင်းဖေါ စသော တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သွေးစည်းမိအောင် ချစ်ကြည်ရေးကို အများဆုံး စွမ်းဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူမှာ မကြာမီက ရေတိမ်နစ်ခဲ့ရရှာသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပင် ဖြစ်သည်" ဟူသတည်း။
အကြောင်းသင့်၍ ဗိုလ်ချုပ်၏ အကြောင်းကိုပါ အနည်းငယ် ရေးရပေဦးမည်။ ဗိုလ်ချုပ်တွင် ထူးခြားသော အရည်အချင်း တခုရှိ၏။ ၄င်းကား သူ၏နာမည်ကြားရုံနှင့် ချစ်ခင်ကြည်ညိုသူ ပေါသလောက် မမြင်ဘူးသူများသည် မြင်လျှင်မြင်ချင်းပင် သူ့အား ချစ်ခင်လေးစားပြီး ကြည်ညို အားကိုလိုစိတ် တပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သော သတ္တိထူးပင်တည်း။
ထို့ကြောင့်ပင် အိန္ဒိယပြည်ထုတ် ဖိုရမ်း(Forum) အမည်ရှိ ရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်တွင် (General U Aung San, Of BURMA.) "ဗမာပြည်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးအောင်ဆန်း" ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သူ့အကြောင်းရေးသားရာ၌...
"ဂန္ဒီကြီးကဲ့သို့လည်း ဘာသာရေးကြောင့် ကြည်ညိုခံရသူ မဟုတ်၊ နေရူးကဲ့သို့လည်း နိုင်ငံရေးမျက်စိ အလွန် အမြင်ကျယ်ကာ ဗဟုသုတ စွယ်စုံမြောက်သူလည်း မဟုတ်၊ ဆာဒါပတေးကဲ့သို့လည်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်း၌ ထူးချွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သူလည်း မဟုတ်၊ သို့သော် ဂျင်နရယ်အောင်ဆန်းသည် ဗမာလူထု၏ ချစ်ခင်ကြည်ညိုမှု ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို ခံယူရာ၌ ဂန္ဒီ၊ နေရူး၊ ဆာဒါပတေး သုံးယောက်ပေါင်းထားသည်နှင့် ညီမျှလေသည်၊ (ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးနှင့် စည်းရုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ရေး ဗိသုကာကျော် ရဲဘော်အောင်ဆန်း ကျဆုံးခြင်းကြောင့် ဗမာပြည်အတွက်၎င်း၊ အာရှတိုက် တခုလုံးအတွက်၎င်း၊ ကျွန်ုပ် ၀မ်းနည်းကြေကွဲပြီး နှမြော တသ၍ မဆုံးနိုင်ပါ)ဟု အချစ်ဆုံး အဖေါ် သူငယ်ချင်းနှင့် ကွဲရသော ခလေးငယ်ပမာ ငိုကြွေးခဲ့သော ပဏ္ဍစ်နေရူးသည် အောင်ဆန်း၊ ရှာရီးယား၊ ဟိုချီမင်း စသော ရဲဘော် ခေါင်းဆောင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာတွင် သာယာဝပြောသော အရှေ့အာရှ နိုင်ငံသစ်ကြီးကို သူ၏စိတ်ကူးတွင် တည်ဆောက်ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်လေသည်။" ဟူ၍ အရှေ့အာရှ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်ရာ၌ ထူးခြားစွာ စွမ်းဆောင်လတ္တံ့သော ဗိသုကာကျော်တဦး ကျဆုံးခဲ့ပုံ နှမြော တသလျှက် ရေးသားခဲ့လေသည်။
ဗမာပြည်တွင် နယ်ချဲ့စနစ်၏ အကြီးဆုံးသော အမွေအနှစ်တခုကား နိုင်ငံတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အချင်းချင်းသော်၎င်း၊ လူနည်းစုများနှင့် ဗမာပြည်မနေ လူထုနှင့်သော်၎င်း၊ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားကာ မသင့်မတင့် မညီညွှတ်မှု၊ တဦးပေါ်တဦး ယုံကြည်ခြင်း ကင်းမဲ့မှုများ အလိုလို ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင် ဖြစ်လေရာ ထိုသို့ ဗမာလူမျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွင် ကရင် ဗမာအရေးသည် အောက်ဗမာပြည်တွင် အဓိက ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိလေသည်။
ထိုကရင်ဗမာ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု အရေးတော်ပုံသည် ဗြိတိသျှတို့ ဗမာပြည်က ဆုတ်ခွာ၍ ပြေးရသည့် (ဘီအိုင်အေ)ခေတ်တွင် အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ခဲ့လေသည်။ ရွာများကို အပြန်အလှန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လက်နက် ဆွဲကိုင်ခါ တပ်ချီ၍ အလုံးအရင်းနှင့် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြခြင်းတို့ပင်။ ဘီအိုင်အေခေတ် ကရင်ဗမာ အရေးတော်ပုံတွင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၌ ကြုံခဲ့ရလေသည်။
ထိုသို့အကြီးအကျယ် သွေးခွဲ၍ နေကြသော ဗမာနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားတို့အား ယုံနိုင်စရာ မရှိအောင် စစ်အတွင်း ဂျပန်ခေတ်တွင် ဗမာ့လက်နက်ကိုင် တပ်ပေါင်းစု၏ သေနာပတိ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် စွမ်းဆောင် အောင်မြင်ခဲ့လေသည်။
သူ၏ ဗမာ့တပ်မတော်တွင် စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းရေး ဌာနကြီးမှုးအဖြစ် ဗိုလ်မှူးကြီးစောကြာဒိုးကို မြင်ရလျက် ကရင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်သည့် တပ်မတော် စစ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ကရင်ရဲဘော်များ၏ သီးသန့် တပ်ရင်းတို့သည်လည်း အထင်အရှား ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်မှု အရေးတော်ပုံကြီး စစ်ဆင်သော ၁၉၄၅-ခုနှစ် နွေဦးပေါက်သောအခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကရင်ဗမာ သွေးစည်းရေး လုပ်ငန်းကြီးသည် အဆုံးသတ် ချယ်လှယ်ခြင်း ပြီးဆုံးခဲ့လေသည်။
ထိုမျှမကသေး ဖက်ဆစ်ဂျပန်တို့အား စစ်မျက်နှာအရပ်ရပ်၌ ကရင်ဗမာရဲဘော်များသည် ပခုံးချင်းယှဉ်ကာ သေအတူ ယှဉ်မကွဲ တညီတညွတ်တည်း တိုက်ခိုက်လျက်ရှိစဉ် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် ဦးစီးသော ရှေ့တန်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်ပယ်ဖြစ်သော သရက်ခရိုင် စစ်ကြောင်းတွင် ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန် တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသော ချင်းအမျိုးသား ရဲဘော်များကိုပါ ထူးခြားစွာ တွေ့ရလေသည်။ သူတို့လည်း ကရင်ဗမာ ရဲဘော်မျာနှင့်အတူ ဖက်ဆစ်ဂျပန်အား ၀ိုင်းကူ၍ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက် နေကြသည်။ ဘာကြောင့် ဤမျှ သူတို့ညီညွှတ် သွေးစည်းမိကြလေသနည်း။
၁၉၄၇ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်
Posted by JulyDream at 9:27 PM3comments:
ဒီနေ့က... ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆယ့်သုံးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပါ ဆိုတဲ့ အောင်ဆန်းဇာနည် ကဗျာလေးထဲကအတိုင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ပါ။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ကို မသိတဲ့သူတွေ အများသားပဲ။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ချစ်သူများနေ့ကို လွန့်လွန့်လူးဖြစ် အလေးထားနေကြတာကို ကြည့်မရတာတော့ အမှန်ပဲဗျာ။ အဲဒီလိုပြောလို့ မကျေနပ်လည်း မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ ကိုယ်က ကြည့်မရလို့ ကြည့်မရဘူး ပြောတာပါ။ ဘယ်သူဘယ်ဝှါကို ထိခိုက်ပါစေဆိုတဲ့ စိတ်ကြီး လုံးဝမပါတာ အမှန်ပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကို မြန်မာကလေးများနေ့လို့ သတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းလေး လက်ထဲမှာ ရှိလို့သာ မြန်မာကလေးများနေ့ဆိုတာ သိနေတာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ ဒါမျိုးတွေ တံဆိပ်ခေါင်း ထပ်ထုတ်တာ မတွေ့တော့သလို သတင်းစာတွေ မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း အဲဒီနေ့အကြောင်း ဖော်ပြတာ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။
ရှေ့နှစ်ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့တုန်းကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းတချို့ကို ကူးယူဖော်ပြခဲ့သလို ဒီနှစ်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခုကို မူရင်းစာလုံးပေါင်းအတိုင်း ကောက်နှုတ် ဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ အခုမိန့်ခွန်းက ဗိုလ်ချုပ် လုပ်ကြံမခံရမီ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အလိုဖြစ်တဲ့ ၁၉၄၇ ဇူလိုင် ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမဆောင် အပြင်ဘက်နေ လူထုကြီးကို ဟောပြောခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမိန့်ခွန်းတွေကို မဖတ်ဖူး မကြားဖူးလို့ မသိသေးတဲ့သူတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိန့်ခွန်းကို သေချာဖတ်မိပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အထင်လွဲနေတဲ့ ခေတ်ပညာတတ် အမျိုးကောင်းသားများလည်း ကိုယ့်ဘာသာကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ သေသေချာချာ သတိထားစေချင်တာက... ဒီ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဘယ်လို ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာ ရာဇ၀င်မှာ ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ လူတွေကိုလည်း ရာဇ၀င်မှာ ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာ ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို တယောက်စီ တယောက်စီ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ကူးထဲမှာ မာတိကာစဉ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်လို လူစားတွေလဲ။ ဘယ်လို အဖွဲ့ကြီးလဲ ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားမှ အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ်။ အခုနေအခါမှာ ကျုပ်တို့ အစိုးရ လုပ်နေတဲ့ အချိန်အခါမျိုး ဖြစ်တယ်။ အတိုက်အခံဆိုတာ ရှိစမြဲဘဲ။ ဘုရားလက်ထက်က ဘုရားကိုယ်တိုင်ပင် အတိုက်အခံနဲ့ မကင်းခဲ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့လဲ မကင်းနိုင်ဘူး။ ကျုပ်တို့ အစိုးရလုပ်တဲ့ အချိန်အခါမျိုးကလဲ တပ်ပျက်မှာ ဗိုလ်လုပ်ရတဲ့ အချိန်အခါမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျုပ်တို့မှာ ချို့ယွင်းချက်တွေ အမြောက်အများ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်သိတယ်။ ဘယ်အစိုးရမှ ချို့ယွင်းချက် မရှိတဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိဘူး။ တိုင်းပြည်မှာ စေတနာ ထားပြီးတော့ကာ တဆင့်ထက်တဆင့် တက်ပြီး လုပ်လာခဲ့တာ တိုးတက်လား မတိုးတက်ဘူးလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နောက်ရက်များ မကြာခင်လောက်ဆို သခင်နု ပြန်လာလို့ နောက်ရက် တော်တော်လေး ကြာလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို အတိအလင်း ကျေညာနိုင်တဲ့ စာတမ်းမျိုး ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ အဲဒီတော့ကား ကျွန်တော်တို့ဟာ လွတ်လပ်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်ထိအောင် စခမ်းတက်လာပြန်ပြီ၊ တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်လို စခမ်းတက်လာပြီ ဆိုတာ အစရှိသဖြင့် ခင်ဗျားတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာ တဆင့်ထက်တဆင့် တက်လာတာ လွတ်လပ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တဆင့်တက်လာတာကို ရက်များ မကြာခင် ခင်ဗျားတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါတွေကို မြင်ရရုံတွင် မကဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ဒီအစိုးရနဲ့ အရင်တုန်းက ရှိတဲ့အစိုးရတွေ အကုန်လုံး ယှဉ်ပြီး ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျုပ်ပြောရဲတယ်။ အခုအစိုးရထဲမှာ လာဘ်စားတဲ့ လူတွေ မရှိဘူးဆိုတာ ကျုပ်ပြောရဲတယ်။ အရင်တုန်းက ကျုပ် အတိအလင်း ပြောတယ်။ လာဘ်စားတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘာပြောဦးမလဲ။ အဲဒီလို လူတွေက အခုနေအခါမှာ တိုင်းပြည်ကို မိမိတို့ပါတီပြန်ပြီး အာဏာရအောင် ခြေထိုးကြတယ်။ ခြေထိုးကြတဲ့ ကိစ္စမှာ အယောင်ယောင် အမှားမှား ဖြစ်ကြတဲ့ လူတွေဟာ စေတနာပါသည် ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက်တဲ့ ရန်သူ နံပါတ် ၁ တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ ရန်သူ နံပါတ် ၁ တွေကို ခင်ဗျားတို့ ထောက်ခံချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် ခင်ဗျားတို့ လယ်ပင်း ခင်ဗျားတို့ဘဲ ကြိုးတပ်ကြပေတော့။
ကျုပ်တို့ဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရဖြစ်အောင် အတင်းအဓမ္မ လုပ်လာလို့ အစိုးရဖြစ်လာတာ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုကြောင့် ကျုပ်တို့ အစိုးရ ဖြစ်နေရတာဘဲ။ တိုင်းပြည်လူထု ယုံကြည်မှု မရှိဘူး မကြည်ညိုဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့လဲ တွယ်မနေပါဘူး။ ထွက်မှာပါဘဲ။ သို့သော်လည်း တနှစ်လောက် ကျုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျုပ်တို့ ဘယ်လိုလူစားတွေဘဲ၊ ရာဇ၀င်ထဲ အရေးခံရမဲ့ လူတွေလား၊ ရာဇ၀င်မှာ အဆဲခံရမယ့် လူစားတွေလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် သိပါလိမ့်မယ်။
Posted by JulyDream at 10:02 AM9comments:
We care for victims
but never take sides
We are directed by need
not by kings
but never line our pockets
We have many ideas
but only one ideal
We respect nations
but cross borders to help
The seven Fundamental Principles of Red Cross and Red Crescent Movement
Cartoon Credit: ICRC Credit Section
Posted by JulyDream at 7:00 AM4comments:
အတ္တဟိတနဲ့ ပရဟိတ မျှစေမယ့်
မှတ်ချက်။ လူရင်းကြီးတွေ မဖွကြေးနော်... အဟဲ။
Posted by JulyDream at 10:42 AM 10 comments:
ဂျီတော့ခ်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ရေးနေကြတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အများစုကတော့ အလွဲသုံးစားပြုမှုပေါ့။ စုံစီနဖာ မျိုးစုံ တွေ့နေရပေမယ့် ဇာတ်လမ်းတွေက ရိုးမသွားပါဘူး။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး မရိုးရအောင် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ကြုံဆုံနေရတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ဇူလိုင်လည်း အွန်လိုင်းကမ္ဘာထဲမှာ တကူးတက အပူမရှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ပေမယ့်လည်း အဲဒီအရှုပ်တော်ပုံ ကပ်ဘေးကြီးက ပြေးမလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ရှေးဘ၀ ၀ဋ်ကြွေး မပြေသေးလို့ ဒီဘ၀ ခါးစည်းဆပ်နေရသလားပဲ။
Blogကမ္ဘာမှာ ရေးသူဖတ်သူ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်လို့ရအောင်... ရေးသားထားခဲ့တဲ့ စာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်စုံတရာ အငြင်းပွါး ဝေဖန်စရာတွေ ရှိရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆို ဝေဖန်လို့ရအောင်... ဂျီးမေးလ်လေး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ အသိအကျွမ်း အသစ်တွေ ခင်မင်ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းလေးမှာ ကျင်လည်နေတဲ့သူ အများစုကတော့ စာတတ်ပေတတ်တွေပါပဲ။ ကျီးကို ဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ်ကို ကျီးရိုသေ ဆိုသလို ဂျီတော့ခ်မှာ သူတို့က အေးဆေးပါပဲ။ မအေးဆေးတာကတော့ Forward email တွေမှာ ပါလာတဲ့ လိပ်စာမှန်သမျှ လှမ်းဖိတ်ပြီး ဂျီတော့ခ်လောကထဲ ဘုမသိဘမသိ ၀င်လာတဲ့ သကောင့်သား အထီးအမ ပေါင်းစုံပါပဲ။
မှတ်မှတ်ရရ ပြဿနာတစ်ခုက ယောကျာ်းလေး ၃ ယောက်ပါတဲ့ ပုံတစ်ခုကို တင်ထားပြီး ဆောင်းဆိုတဲ့ စာလုံးတစ်ခုပါတဲ့ အကောင့်တစ်ခုက ဟယ်လိုဆိုပြီး အင်္ဂလိပ်လို စနှုတ်ဆက်လို့ ကျွန်တော်က ဟုတ်ကဲ့ ပြောပါခင်ဗျာ...လို့ မြန်မာလို စာရိုက် ပြန်ဖြေလိုက်တော့ ကိုယ်တော်က ဘားဂလစ်ရ်ှနဲ့ ပြန်မေးပါတယ်။ မင်း ဗမာလားတဲ့။ မြန်မာစာလုံးနဲ့ ရိုက်ပြီး ပြန်ဖြေထားတာတောင် မင်းဗမာလားလို့ မေးရတဲ့ ငကြောင်မျိုးကို အဲဒီတစ်ခါမှာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အတော်လေးကို စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။
နောက်တစ်ခါကတော့ ရပ်ကွက်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂျီမေးလ်။ လူဆိုးလေးပေါ့။ အသက်ကတော့ ငယ်ပါတယ်။ ရုပ်ကတော့ ကျွန်တော်ထက် ကြီးတယ် ထင်ရတယ်။ ဘယ်သူကနေ ဘယ်လိုပေးလိုက်လို့လဲ မသိဘူး ကျွန်တော့်သုံးနေတဲ့ ဂျီမေးလ်အကောင့်က သူ့ဆီရောက်သွားတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြတယ် ဆိုပါတော့။ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်ကြတော့ သူလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ၀ိုင်းပြီး လုပ်ပေးဖူးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်နေလဲ ပြောဖြစ်ဆိုဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်လလောက် တစ်ရက်ခြား တစ်ခါလောက် ညပိုင်းတွေမှာ စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကမ့်ဝင်ရတော့ အွန်လိုင်းနဲ့ တစ်ပတ်လောက် အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတယ်။
ကမ့်က ပြန်ထွက်လာပြီး တစ်ပတ်လောက်အထိ သူ့ကို အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့ရပါဘူး။ တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော့်ကို ဟယ်လိုဆိုပြီး လှမ်းပြီး နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သိထားပြီးသား လူဟောင်းပဲဆိုတော့ ဝေး... နေကောင်းတယ် မဟုတ်လား...လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ သူက အင်္ဂလိပ်လို ရား... ဆိုပြီးတော့ I want to meet you တဲ့။ ကျွန်တော် နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်။ သူက ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော်က စင်္ကာပူမှာ။ ဘာကြောင့် သူက ကျွန်တော်ကို တွေ့ချင်ရသလဲပေါ့။ ကျွန်တော်က ဘာလုပ်ဖို့လဲ... လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်။
အဲဒီတော့ သူက ဖုန်းရှိလားတဲ့။ ရှိမှာပါတဲ့။ ရှိရင် ပေးပါနော်တဲ့။ ဒီကောင် သိပ်ပြီး မူမမှန်တော့ဘူးလို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ထင်စ ပြုလာပြီ။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးကိစ္စ တစ်ခုခုများ ပြောစရာရှိလို့ pfingo ကနေ ခေါ်မလို့လားဆိုပြီး ဖြေတွေးပေးလိုက်သေးတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ ဘာအကြောင်းထူးရှိလဲ ပြန်မေးလိုက်တယ်။ သူက ဒီလိုပါပဲ ပြောချင်လို့ပါ။ ပေးပါနော်တဲ့။ မနက်ဖြန် ည အားလားတဲ့။ အပြင်မှာ ဆုံကြရအောင်နော်တဲ့။
ဟားဟား.... ဘာကြီးလဲဟ။ နည်းနည်းတောင် လန့်သွားတယ်။ သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ဒီအကောင့်ကို မူရင်းပိုင်ရှင် သုံးနေတာ မဟုတ်လောက်ဘူး။ တခြားတစ်ယောက် ၀င်သုံးနေတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို စကားတွေ ထွက်လာတာ။ သေချာတာက ကျွန်တော့်ကို မူရင်းပိုင်ရှင်က ဒီလိုစကားမျိုးတွေ လုံးဝ မပြောရဲခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့များ ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်ကြသလဲပေါ့။ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ အကောင့်ကို ကိုယ်ပဲ သုံးကြပေါ့။ အခုဟာ သူများတကာကို လက်ပြောင်းလက်လွဲ လုပ်သွားတာက မကောင်းဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။ Contact list တွေကို လူကုန်ကူးသလိုမျိုး သူများလက်ထဲ ပေးခံလိုက်သလို ခံစားရတယ်။ အတော်ကို စိတ်ဆိုးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် ဒီကောင်ကို ပညာပေးလိုက်အုံးမယ်။
ရန်ကုန်က အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ချက်တင်းထိုင်ရင်း ဖွန်ကြောင်နေတာ ဖက်ရှင်တစ်ခုလို ဖြစ်နေကြပြီလား။ ကိုယ်မအားတဲ့အချိန် တခြားတစ်ယောက်ကို မင်း ဆက်ကြောင်ထားလိုက်ကွာဆိုပြီး လက်ပြောင်းလက်လွှဲ လုပ်နေကြတာလား။ လက်လွှဲယူထားတဲ့ အကောင်ကလည်း အခုပြောနေတဲ့သူက အထီးလား အမလား ဘာတစ်ခုမှ မသိပဲ စွတ်ဆတ်ကြောင်တာကလည်း ဆလံသလောက်ပါတယ်။ မတော်လို့များ မူရင်းပိုင်ရှင်နဲ့ ပတ်သတ်နေတဲ့ အမျိုးအရင်းတွေ၊ ဆရာတွေ ဆရာမတွေများ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလောက်တောင် အသိဥာဏ် နုံနဲ့ရတာလဲဆိုပြီး စိတ်ထဲက မခံချိ မခံသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ အင်တာနက်သာ သုံးနေကြတာ ပုဂ္ဂလိက လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာကို နားမလည်သေးတဲ့သူတွေပဲဗျာ။
ခေတ်မှီချင်လွန်းလှတဲ့ အောင်သွယ်တော် မြားနတ်မောင်လည်း ဂျီတော့ခ်လောကထဲ ဒိုင်ဗင်ထိုးဝင်လာတော့ ဒင်းနဲ့ကျွန်တော် နောင်ဂျိန်ချရပြီပေါ့ဗျာ။ ဒင်းကတော့ ဒီလူပျိုကြီး စွံပါစေတော့ ဆိုပြီး မယောင်မလည် အူကြောင်ကြား မနူးမနပ် သူငယ်နပ်စား ကလေးမတွေကို ကျွန်တော့် ဂျီတော့ခ်ထဲ လွှတ်ထည့်လိုက်တာမှာ ဒေါသအိုးကို စနက်တံ ဖြုတ်သလို ဖြစ်သွားရတာပေါ့။ ကလေးမတွေကလည်း မေးခွန်းမျိုးစုံကို တရပ်စပ် လိမ့်မေးတာက အလုပ်တစ်ဘက်နဲ့ ဖြေနေရတဲ့ ကျွန်တော်အဖို့ ဒေါသဒီဂရီတွေကို တရိပ်ရိပ် မြင့်စေပါတယ်။ ပြီးရင် ဖြေထားတာကို မယုံသလိုလိုနဲ့ တကယ်လား။ အဟုတ်လား။ မလိမ်နဲ့နော် ဆိုပဲ။ ညည်းတို့ထက် အသက်ကြီးပါတယ်။စင်္ကာပူမှာ နေပါတယ်။ အခု အလုပ်များနေပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ဖြေထားတာကို မလိမ်ပါနဲ့ အခု ဘယ်ဆိုင်ကနေ သုံးနေတာလဲ တဲ့။ သေ သေ... သေလိုက်ကြပါတော့ကွယ်။
ကိုဇူလိုင်ဗျာ... ဘာဖြစ်လို့ ဒုက္ခခံနေရသလဲ။ မသိတဲ့သူဆိုရင် နဂိုကတည်းက လက်မခံနဲ့လေ။ ဒါမှမဟုတ် လက်ခံမိရင်လည်း block လုပ်ပေါ့ဗျာလို့ ပြောကြမှာကို သိနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပြန်ဖြေရှင်းပေးရရင် ကျွန်တော် မသိပေမယ့် လက်ခံမိတာက Blog ကနေတဆင့် လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်မှာ စိုးလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက သိဟောင်းကျွမ်းဟောင်းတွေ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။ စကားပြောကြည့်လို့ အချိုးမပြေတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော် block လုပ်ပါတယ်။ အခုပြောနေတာက block မလုပ်ခင်အချိန်မှာ ခံရတဲ့ ဒုက္ခလေးကို ပြောနေတာပါ။ တစ်ယောက်လည်း မဟုတ် နှစ်ယောက်လည်း မဟုတ်တော့ စိတ်ကြီးကိုမှ အတော်ညစ်ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် Forward Mail တွေ ပို့ရင် ကျွန်တော့် အီးမေးလ်ကို BCC မှာပဲ ထည့်ပြီး ပို့ကြပါခင်ဗျာလို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော့်ဆီ ဘာတစ်ခုမှ Forward မလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ မပို့လို့ ချန်ထားခဲ့လို့ စိတ်ဆိုးမယ့် လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်ဇူလိုင် လုံးရာကနေ ပြားသလိုမျိုး ယောကျာ်းအချင်းချင်း ဖွန်ကြောင်ခံရသလို မနူးမနပ် သာလိကာမတွေရဲ့ တကယ်လားဟင် ဟုတ်ရဲ့လားဟင် မညာနဲ့နော်ဆိုတဲ့ တီတီတာတာ စကားမလိုင်များကြားမှာ အီစလံဝေပြီး ဒေါသဒီဂရီတွေ တိုးနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ကို သနားကြပါ... သနားကြပါခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 12:28 AM 24 comments:
ဖိနပ်ပျံကြီး ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ။ ၂၀၀၈ ရဲ့ နှစ်ဆုံးပိုင်းမှာ ပျံတဲ့ဖိနပ်မျိုး ၂၀၀၉ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ တစ်ခါ ထပ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ရှေ့တစ်ခေါက်က အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှပါ။ ဒီတစ်ခါ ဈေးဦးပေါက်သွားတာက တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်ပါပဲ။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Davos မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ World Economic Forum တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဝမ်ကျားပေါင်ဟာ ပြည်တော်မပြန်ခင် နောက်ဆုံးခရီးစဉ်အနေနဲ့ အင်္ဂလန်ကို ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘရောင်းနဲ့ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က တနင်္လာနေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ Cambridge University က ဟောပြောပွဲမှာ မိန့်ခွန်းချွေတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင် မိန့်ခွန်းရဲ့ အဆုံးပိုင်းနားအရောက်မှာ ဂုဏ်ပြုဖိနပ်စာ အကျွေးခံရပါတော့တယ်။ ခန်းမဆောင်ရဲ့ နောက်ပိုင်းနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဥရောပတိုက်သားလို့ ထင်ရပြီး ဆံပင်အနက်ရောင်နဲ့ အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဖိနပ်နဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
ဒီတစ်ခါ ဖိနပ်နဲ့ ကောက်ပေါက်တဲ့သူက လက်မတည့်ရှာပါဘူး။ အဝေးကြီးကနေ လှမ်းပစ်ရလို့ ထင်ပါတယ်။ ၀မ်ကျားပေါင်ရဲ့ ဘေးဘက် ပေအနည်းငယ်အကွာကို ရောက်အောင်ပဲ ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျော့ဘုရ်ှတုန်းကလို ခေါင်းငုံပြီး ရှောင်စရာတောင် မလိုခဲ့ပါဘူး။ ဂျော့ဘုရ်ှကတော့ ခေါင်းမငုံ့မိခဲ့ရင် နဖူးပေါက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်အပြီးမှာ တက္ကသိုလ်လုံခြုံရေးတွေက သူ့ကို အပြင်ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ထွက်သွား ထွက်သွား... ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ပြန်အော်နေတာကို ရုပ်သံတွေကနေတဆင့် မြင်တွေ့ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မိန့်ခွန်းပြောတဲ့ စင်မြင့်နားမှာလည်း လုံခြုံရေးတွေ ပိုများသွားတာပေါ့ဗျာ။
လူပုံအလည်မှာ ဖိနပ်နဲ့ ကောက်ပေါက်ခံရလို့ မအီမသာဖြစ်သွားရရှာတဲ့ ၀မ်ကျားပေါင်ကတော့ အခုလို အထင်သေးဖွယ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ဗြိတိန်နဲ့ တရုတ်ပြည်အကြား ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ထိခိုက်သွားစေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်တဲ့သူကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဥပဒေအရ တရားစွဲဆို အရေးယူသွားမယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားသွားပါသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လက အီရတ်ကို အမေရိကန်သမ္မတ တစ်ဦးအနေနဲ့ နောက်ဆုံးခရီးအဖြစ် သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဖိနပ်နဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် တီဗွီသတင်းထောက် Muntadhar al-Zaidi ကိုတော့ အာရပ်ကမ္ဘာက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို့ ချီးမွန်း ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ဖိနပ်နဲ့ပေါက်တာဟာ အပြင်းထန်ဆုံး စော်ကားမှူတစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဲဒီအီရတ်သတင်းထောက်ဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အထူးဧည်သည့်တော်ကို စော်ကားမှူနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ်အထိ အပြစ်ပေး အရေးယူခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။
Posted by JulyDream at 10:46 AM7comments:
Posted by JulyDream at 1:15 AM 23 comments:
Operation rainbow ဆိုတာ facebook ထဲက Group တစ်ခုပါ။ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို လိုအပ်သလို ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြမယ့် စိတ်တူကိုယ်တူရှိတဲ့ လူငယ်တစ်စုပါပဲ။ အဲဒီအဖွဲ့လေးက YDC Camp 2008 တုန်းက Elvis Group ဆိုတဲ့ Group E ကနေ စတင် ပေါက်ဖွားလာတာပါ။ “Behind every storm, the rainbow will always be there… Waiting behind the dark clouds…” ဆိုပြီး အဖွဲ့အမည်ကို Rainbow လို့ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲမှာ အများစုက စလုံးတွေပါ။ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ မြန်မာလည်း ပါပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိလာရင် သူတို့အနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလို အာဆီယံဒေသအတွင်း အခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်း လုပ်ကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါသေးတယ်။
လောလောဆယ်မှာ ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ ရေဘေးမှာ စတင်ကူညီပါမယ်။ အဖွဲ့ထဲမှာ ဖိလစ်ပိုင် ကြက်ခြေနီက သူတွေ ပါပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းမှာ ဖိလစ်ပိုင် Gingoog မြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေကြီး မြေပြိုမှုတွေကို အကူအညီပေးဖို့ ဖိလစ်ပိုင် သူငယ်ချင်းက တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ရေဘေးဒုက္ခသည် ဦးရေက လူဦးရေ ၁ သိန်းကျော် ရှိပြီး ၁၁ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂ ဦး ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ၇ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ဖိလစ်ပိုင် ရေဘေးအတွက် ကူညီမယ်ဆိုပြီး အမာခံအဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးကို အခြေခံပြီး ရံပုံငွေ စုဆောင်းတဲ့အလုပ်ကို စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီOperationမှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီပေးချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေဆီက အလှူငွေကောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ အလှူငွေ ကောက်ရတယ် ဆိုတာလည်း သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ပြောတော့တာ လွယ်တာပါ။ တကယ် လုပ်ရင် အတော်ခက်ပါတယ်။ အဓိက ယုံကြည်မှုပေါ့။ နောက်တစ်ခုက ခံယူချက် သဘောထား။ အဲဒီတွေမှာ ထပ်တူ မညီရင် အတော်ကို မလွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ်က မြန်မာပြည်ကဆိုတော့ စလုံးရောက် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို အဓိကထား အလှူငွေ ကောက်ခဲ့မိတယ်။ မြန်မာအများစုကတော့ မြန်မာပြည်အတွက် မဟုတ်လို့ဆိုပြီး အလှူငွေ မထည့်ကြပါဘူး။ ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ငြင်းတဲ့သူတွေ ရှိသလို မြန်မာပြည်အတွက် မဟုတ်လို့ အလှူငွေ မထည့်နိုင်ဘူး စိတ်မ၀င်စားဘူးလို့ တုံးတိတိ ပြောတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းကို နားလည်ခံစား သဘောပေါက်တဲ့သူတွေပဲ အလှူငွေ ထည့်ကြပါတယ်။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုကို သဘောပေါက်ကြတဲ့သူတွေလို့ မြင်မိပါတယ်။
မြန်မာပြည်အတွက် မဟုတ်လို့ အလှူငွေ မထည့်နိုင်တဲ့သူတွေကို ခံစားနားလည်ပေးလို့ ရပါတယ်။ သူတို့မှာ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်သွားလို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခု ပြန်စဉ်းစားပေးရမှာက ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် မဟုတ်လို့ မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံသားတွေ မြန်မာပြည်အတွက် အကူအညီတွေ ပေးနေတာကို ပြန်စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ငါ့တို့နိုင်ငံမှ မဟုတ်တာကွာ... လုပ်ပေးမနေပါနဲ့လို့ သူတို့ သဘောမထားပါဘူး။ ဥပမာ နာဂစ်တုန်းက စင်္ကာပူက မြန်မာမဟုတ်တဲ့သူတွေ နိုင်သလောက် ကူညီပေးခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။ သူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ် တစ်စုံတရာ မရှိပဲ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားပြီး လှူဒါန်းကူညီခဲ့တာတွေ တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်တိုင်းပြည်မဟုတ်တဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ အကူအညီပေးဖို့ လိုအပ်လာရင် တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ကူညီသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ အတုံ့အလှည့်လေးပေါ့ဗျာ။
ဒီလို အလှူငွေ ကောက်ခံတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော့်Blogပေါ်မှာ ပို့စ်တင်ပြီး မပြောခဲ့ပါဘူး။ လောလောဆယ် စာရင်းပိတ်သိမ်းချိန်အထိ ကျွန်တော့်ဘက်က အလှူငွေအဖြစ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၁၀ ကောက်ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုOperationမှာ အလှူငွေ ထည့်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် အနားတ၀ိုက်က သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲဝိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ လုံးဝမရှိပဲ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့ အဖြူရောင် စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အခုလို ကူညီပေးခဲ့တာကို ဖိလစ်ပိုင်က သူငယ်ချင်းတွေ သိရှိခံစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
No discrimination as to nationality, race, religious beliefs, class or political opinions. Together for Humanity!
Posted by JulyDream at 6:24 AM7comments: